अनुभबी महासचिबका तार्किक सैली | www.sidhakurausa.com
एनआरएन एनसीसी युएसएको आसन्न निर्बाचनमा महारथी (महासचिब) पदमा ५ प्रत्यासी मैदानमा छन । उनीहरु मध्ये अनुभवी र पाका व्यक्ति हुन -बाबुराम (बि. आर.) लामा । प्रत्यासी लामा एनआरएन एनसीसी अफ इज्राएलमा दुई बर्ष महासचिबको अनुभव बटुली सकेका व्यक्तित्व हुन । इज्राएलको एनआरएनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु अमेरिकाका जस्ता स्थायी बासिन्दा होइनन । त्यहा प्राय नेपालीहरु कामका लागि आउने हुँदा एनआरएनमा पनि आउने जाने क्रम सामान्य जस्तै लाग्छ । त्यस्तो पृष्ठभूमिमै पनि आफ्नो दुई बर्षे कार्यकाल सकेर लामाले अर्को कार्यसमितिको निर्बाचन गराई निर्बाचित बोर्डलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गराएको मिठो अनुभव सुनाउनु भएको छ । उनि भन्छन – एनआरएन अमेरिकाको पहिलाको जस्तै हालत थियो एनआरएन इज्राएलको, त्यसको ब्यबस्थापनमा मैले खेलेको भूमिकालाई अझै पनि इज्राएलका धेरै साथिहरुले प्रशंसा गर्नु हुन्छ । प्रयासी लामाको यो मिठो अनुभव एनआरएन अमेरिकामा पनि लागु गर्न सकियो भने निश्चित रुपमा हामी पनि केहि गर्न सक्छौ । महासचिब लामाका यी अनुभवहरुमै केन्द्रित रहेर उनीसंग अहिले बिहान छोटो कुराकानी भएको थियो, त्यसको सार संक्षेप:
सिधा कुरा: एनआरएन एनसीसी अफ युएसएको महासचिब पदमा निर्बाचन जितिन्छ त?
लामा: म अहिले आफ्ना कुरा चुनावका सबै प्रतिस्पर्धीहरुलाई बुझाउन प्रयासरत छु, वहाहरुले बिस्तारै कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ । वहाहरु सबैलाई मैले आफ्ना कुराहरु बुझाउन अझ केहि दिन लाग्छ त्यसपछि म ढुक्कसाथ भन्न सक्छु, चुनाव जितिन्छ ।
सिधा कुरा: उम्मेदवारहरुले कुरा बुझेर चुनाव जितिने हो र?
लामा: निश्चित रुपमा हो, जब सबै उम्मेदवारहरुले मेरो कुरा बुझ्नु हुन्छ त्यसपछि वहाहरु सबैले आ-आफ्ना मतदाताहरुलाई बुझाउनु हुन्छ भने म पनि त्यो क्रमलाई अत्यन्त महत्व दिएर लाग्छु, त्यसपछि चुनाव जित्नुको बिकल्प हुन्न ।
सिधा कुरा: कति उम्मेदवारहरुले तपाइँका कुरा बुझ्नु भएको छ?
लामा: न्युयोर्क र क्यालिफोर्नियाका सम्प्रेषणका सहभागी प्राय सबै उम्मेदवारहरुलाई बोध गराई सकेको छु, मलाई बिस्वास छ वहाहरुले नै मलाई जिताउनु हुन्छ ।
सिधा कुरा: तपाइँले बोध गराउनु भएका कुराहरु चाहि के के हुन नि?
लामा: चुनावका लागि मेरा लम्बेतान एजेण्डाहरु छैनन् भने यति छोटो समयका लागि हामी चुनाव लड्दै गरेको हुँदा धेरै कुराहरु गर्नुको अर्थ पनि छैन । मूल रुपमा मैले सन् २०१५ को एनआरएन अमेरिकाको निर्बाचन गरि दिगो संस्थागत बिकासका लागि मुखचित्र गर्ने, नेपालीको लागि नेपाली भन्ने एनआरएनएको मूल नारालाई अमेरिकाको स्थानिय स्तरसम्म पुर्याउने र एनआरएन एनसीसीको संगठन बिस्तार गर्ने प्रमुख एजेन्डा अघि सारेको छु । खासमा सबै उम्मेदवारहरुको एजेन्डा हेर्यो भने केहि न केहि सबैसंग मिल्ने हुनाले हामी सबैको एजेन्डा एकै हो भन्नु पर्छ ।
सिधा कुरा: सबैको एकै एजेन्डा हो भने त सहमति हुनु पर्ने होइन र?
लामा: सहमतिको प्रयास गर्ने समय गई सकेको छ तर चुनाव पछि पनि सहमति गरि अघि बढ्न सकिन्छ । सबै मिलेर संस्थागत बिकासमा जोड दिने हो भने पछिल्ला पछिल्ला चुनावहरु गहकिला हुन सक्छन । सहमतिको बाधक कोहि हुनुहुन्न र मलाई लाग्छ सबैले एनआरएन अमेरिकाको आबस्यकता बुझ्नु भएको छ ।
सिधा कुरा: के हो त्यस्तो आबस्यकता?
लामा: त्यो आबस्यकता भनेको संस्थागत बिकास गर्ने भनेको हो । अहिले एनआरएन अमेरिकाको जग र पद्दति बनाउने बेला छ, सबैले त्यसलाई आत्मसात गर्ने हो भने अनुभवी व्यक्तिलाई अघि सार्नु पर्छ भनेर मतदाताहरुले बुझ्नु होला भन्ने मलाई लाग्छ ।
सिधा कुरा: त्यो आबस्यकता पुरा गर्न अन्य प्रतिस्पर्धी भन्दा आफु सक्षम छु भन्नु भएको हो?
लामा: हामी सबै सक्षम छौ तर म मेरो बिगतको अनुभवले अहिले एनआरएन अमेरिकालाई पनि जग र पद्दति दिने कुरामा बढी योगदान दिन चाहान्छु । एनआरएनलाई अहिले सक्षम बनाउन सक्यौ भने चुनाव फेरी फेरी लड़ौला भन्ने कुरा साथीहरुलाई बुझाउने काम भैरहेको छ ।
सिधा कुरा: बुझ्नु होला त वहाहरुले?
लामा: बुझ्दै हुनुहुन्छ । समय लाग्छ तर चुनाव डिलमा आइसकेकाले वहाहरुलाई दोधार परिरहेको मैले बुझेको छु । आशा छ वहाहरु सबै मलाई जिताउन लाग्नु हुन्छ । फेरी मैले धेरै मतदाताहरुसंग यो क्याम्पेन चलाई सकेको पनि छु, सबैको सल्लाहा एनआरएन अमेरिकाको संस्थागत बिकासमै जोड दिन भनिएको छ ।
यी नै हुन महासचिबका प्रत्यासी बाबुराम लामा, सरल र छोटो मिठो कुराकानीबाट सबैलाई खुशी पार्न सक्ने खुबी रहेछ उनिसंग । सिधा कुरा उनको तार्किक सैलीको तारिफ गर्छ ।